मजदूरको पीडाः ठेकेदार भागेपछि पाँच दिन भोकै हिँडेर घर फर्किए, माफिया तन्त्र कहिलेसम्म ? - Jillakhabar.com
मजदूरको पीडाः ठेकेदार भागेपछि पाँच दिन भोकै हिँडेर घर फर्किए, माफिया तन्त्र कहिलेसम्म ?
१८ माघ २०७७,आइतवार
बागलुङ, १८ माघ २०७७ ।
नेपालमा मजदूरको व्यथा सुनिसाध्य छैन । महिनाँंै काम गरेपछि निर्माण व्यवसायीले रित्तो हात फर्काएको घटनाको अनगन्ती फेहरिस्त छन् । आफूले काम गरे पनि निर्माण व्यवसायी भाग्दा मजदूरले ज्याला नपाउँदा पाँच दिन भोकै हिँडेर घर आएको कुरा सुन्दा जो कोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तनहँु जिल्ला, दमौलीमा भवन निर्माणको काम गरेका पर्वत र बागलुङका मजदूर ठेकेदार भागेपछि भोकभोकै पाँच दिन हिँडेर घर फर्किएका छन् ।
Previous articleआज सुनकाे भाउ ताेलामा एक सय रुपैयाँ बढ्याे, चाँदीकाे भाउ पनि उकालाे चढ्दै